3 Yohane 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Nhoma a Ɛto So Abiɛsa 1:1-14
Nkyia ne mpaebɔ (1-4)
Wɔkamfo Gaio (5-8)
Diotrefe pɛ sɛ odi kan wɔ biribiara mu (9, 10)
Wɔka Demetrio ho asɛmpa (11, 12)
Nsrahwɛ ho nhyehyɛe ne nkyia (13, 14)
1 Me ɔpanyin no, me na merekyerɛw krataa yi. Merekyerɛw abrɛ wo, me dɔfo Gaio. Medɔ wo paa. 2 Me dɔfo, mebɔ mpae sɛ ade nyinaa mu ensi wo yiye, na nya ahoɔden, sɛnea asi wo* yiye no. 3 M’ani gyei paa bere a anuanom ba bedii nokware a wukura mu no ho adanse, ne sɛnea wokɔ so nantew nokware no mu+ no. 4 Biribiara nni hɔ a ɛma m’ani gye* sen eyi: Sɛ́ mɛte sɛ me mma da so ara nam nokware no mu.+ 5 M’adamfo pa, nea woyɛ ma anuanom no kyerɛ sɛ woyɛ ɔnokwafo. Ɛmfa ho sɛ wɔyɛ ahɔho no, woboa wɔn.+ 6 Anuanom yi adi wo dɔ ho adanse wɔ asafo no anim. Mesrɛ wo, gya wɔn kwan sɛnea ɛsɔ Onyankopɔn ani.+ 7 Efisɛ ne din nti na wɔnam, na wɔannye biribiara+ amfi amanaman mufo hɔ. 8 Enti ɛyɛ yɛn asɛde sɛ yɛsom wɔn a wɔte saa no hɔho,+ na ama yɛne wɔn abom ayɛ nokware no ho adwuma.+ 9 Mekyerɛw biribi kɔmaa asafo no, nanso Diotrefe a ɔpɛ sɛ odi kan wɔ wɔn mu+ no de, ɔmfa obu nnye biribiara mfi yɛn hɔ.+ 10 Ɛno nti na sɛ meba a, mɛkae ne nnwuma a ɔreyɛ no, sɛnea ɔkeka yɛn ho nsɛm yayaayaw*+ no. Ɛno koraa nnɔɔso mma no. Ɔmfa obu nso nnye anuanom,+ na wɔn a wɔpɛ sɛ wogye wɔn no nso, ɔyɛ nea obetumi biara sɛ obesiw wɔn kwan na watu wɔn afi asafo no mu. 11 Me dɔfo, nhwɛ bɔne nsua, na mmom hwɛ papa sua.+ Nea ɔyɛ papa no fi Onyankopɔn.+ Nea ɔyɛ bɔne no nhuu Onyankopɔn.+ 12 Demetrio de, wɔn nyinaa ka ne ho asɛmpa, na nokware no ara nso di ne ho adanse pa. Ampa, yɛn nso yedi ne ho adanse, na wunim sɛ adanse a yedi no yɛ nokware. 13 Mewɔ nneɛma pii a anka mɛkyerɛw abrɛ wo, nanso mempɛ sɛ mekyerɛw no krataa so.* 14 Mmom m’ani da so sɛ ɛrenkyɛ mehu wo, na me ne wo akasa anim ne anim. Asomdwoe nka wo. Nnamfonom a ɛwɔ ha no kyiakyia wo. Bobɔ nnamfonom a ɛwɔ hɔ no din mmaako mmaako, na kyia wɔn ma me.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɛma minya anisɔ kɛse.”
^ Nt., “ɔkeka nsɛmmɔne fa yɛn ho.”
^ Anaa “mempɛ sɛ mede krataa ne adubiri kyerɛw.”